Ikhaya | Kirin Jewelry
Ubucwebe besiliva obucwebile emiklamweni ehlukahlukene
IKirin Jewelry Company, ezinikele ebhizinisini lama-925 Silver Jew jewelry, anjenge, 925 Sterling Silver Earrings, 925 sterling silver bracelets, 925 sterling silver bangles., Etc. Kirin's Jew jewelry series has a multiple sub-products. Ubucwebe bunaka kakhulu ubuqotho nedumela lebhizinisi. Silawula ngokuqinile ikhwalithi nezindleko zokukhiqiza ekukhiqizeni. Zonke lezi ziqinisekiso zamacici ezinokwethenjelwa ngekhwalithi futhi ezithandekayo ngentengo.
I-OEM Chains Letter 925 Sterling Isiliva Umgexo neRhodium Plating Yowesifazane 71612
I-OEM Chains Letter 925 Sterling Isiliva Umgexo ne-Rhodium Plating for Woman 71612 https://www.kirinjew.com
I-laser kuphela igama lenkampani yamakhasimende noma ilogo kubucwebe:
Kunemiklamo engaphezu kwengu-50 000 egumbini lethu lokubonisa, kufaka phakathi izindandatho, amacici, imihlobiso elengayo, imigexo, namasongo, amabhengezi, ama-brooches, amasethi wobucwebe. Ungakhetha izitayela ozithandayo ku-albhamu yethu yobucwebecwebe, futhi uma ufaka i-oda, ungadinga ukubeka ilogo yakho noma igama lenkampani kubucwebe.
1) izingcezu eziyizigidi eziyi-1.2 zezinto zamandla wonyaka
2) 15-45days isikhathi sokulethwa
3) Intengo engcono yokuncintisana
4) Imiklamo engaphezu kwama-50,000 egumbini lokubonisa
I-Kirin Jew jewelry Company ingumkhiqizi, i-wholesaler kanye ne-exporter etholakala e-Zhuahai, esifundazweni sase-Guangdong, e-China, esinabasebenzi ababalelwa ku-500, izingcezu eziyizigidi eziyi-1.2 zezinto ezinamandla wonyaka. Sakha ubucwebe besiliva / bethusi obungu-925 emiklamweni eyahlukahlukene, kufaka phakathi izindandatho, amacici, imihlobiso elengayo, umgexo, amasongo, amabhande kanye namabrochisi ngamatshe ayigugu ayigugu, itshe lokwenziwa kanye ne-cubic zirconia, isiphetho esihle ngesiliva, i-rhodium, noma umnyama rhodium, kwavuka igolide nephuzi ngegolide.
Ubucwebe bethu bugcizelela ekulawulweni kwekhwalithi kuzona zonke izinyathelo zomsebenzi wobucwebe. Sivimbela iphutha elingadala ukuthi ubucwebe bethu bungathandwa yithi ngaphambi kokuba bafinyelele kumakhasimende ethu.